🥇 ▷ Galaxy Note 9: mooshinka qunyar socodka ah wuxuu ka fiicnaan doonaa S9 +, laakiin kuma fiicna xallinta ✅
Galaxy Note 9: mooshinka qunyar socodka ah wuxuu ka fiicnaan doonaa S9 +, laakiin kuma fiicna xallinta
Galaxy Note 9 ayaa inbadan inaga dhex jira, ilaa hada (sida dhaqan ahaan), waxaan ognahay inta badan tafaasiisha farsamada. Kuwaas waxaa ka mid ah, dib u cusbooneysiisay qolka sawir ee dhabarka, kaas oo qaadaya talaabo hore marka loo eego “Odayga” Xusuusin 8.
Sida aan aragnay usbuuc ka hor, si kastaba ha ahaatee, kamaradaha waa inay ahaadaan lamid ah Galaxy S9 +. Sidan, waxaad sidoo kale sameyn kartaa Xusuusta 9 fiidiyoow tartiib tartiib ah, sida S9 +. Si kastaba ha noqotee, kuwan waa la wanaajin doonaa marka la barbar dhigo madaxa taxanaha ‘S’.
Haddii S9 + ay maamusho inuu duubo 960fps muddo ah 0.2 sekan, Ogeysiiska 9 ayaa ka sii socon doona oo imaan doona (had iyo jeer isla heerkaas) 0.4 ilbiriqsi oo duubitaan ah. Haddii wararka xanta ah ee ku saabsan waaxda sawirradu ay run tahay, markaa waa horumar kombuyuutar, kaas oo (aragti ahaan) sidoo kale lagu dhaqan gelin karo S9 iyo S9 +.
Si kastaba ha noqotee, qaraarku waa isku mid: 720p (HD), sidaa daraadeedna mudnaanta koowaad ee “xalka ugu sarreeya inta lagu guda jiro duubista mooshinka xawaaraha weyn ee taleefanka casriga ah” wuxuu sii ahaanayaa Sony Xperia XZ2, oo awood u leh inuu duubo 1080p (Full HD).
Kaliya waa inaan sugnaa Agoosto 9 in la ogaado awoodaha kaamirada ee Qoraalka 9, iyo (laga yaabee) in la ogaado haddii S9 iyo S9 + la cusbooneysiin doono si loo duubto fiidiyowyada tartiib tartiib xitaa ka sii dheer. Ma u aragtaa inay tahay horumar xiiso leh?
# GalaxyNote9 wuxuu tooganayaa 960fps muddo ah 0.4 sekan. 0.2 ilbiriqsi kabadan # GalaxyS9 pic.twitter.com/46bVpEyUiZ
– SamsungMobile.News | Max (@Samsung_News_) Julaay 27, 2018
Via: Telefon ArenaXigasho: Twitter